Eyona nto ibalulekileyo kuGoogle pixel cyber ngomvulo
Eyona Iindaba Kunye Nohlolo Eyona misebenzi ilungileyo kaGoogle Pixel Cyber ​​ngoMvulo
Eyona misebenzi ilungileyo kaGoogle Pixel Cyber ​​ngoMvulo
Ukuba ulapha, awukho, mhlawumbi ufuna ezinye izivumelwano ezilungileyo. Ngelishwa, uLwesihlanu omnyama kunye noMvulo weCyber ​​ngoku sele ephelile. Ngethamsanqa, kuya kubakho eminye iminyhadala yokuthenga kunyaka olandelayo, eyokuqala enkulu Inkulumbuso yeAmazon 2021 . Awukho owona mhla wayo okwangoku, kodwa kufanele ukuba kusehlotyeni, ngoko ke kukude ithutyana. Kodwa xa isiza, kungcono ukholelwe ukuba siya kuba nazo zonke ezona zintengiso zilungele wena, ke gcina iliso livulekile!
NgoLwesihlanu oMnyama 2020 Sele iyimbali kodwa ubudenge bokuthenga ngoMvulo ngeCyber ​​buqalile. Iidili zikho kuyo yonke indawo kwaye awudingi ukuba nexhala malunga nokujikeleza iivenkile kunye nokulinda emgceni. IWalmart kunye neeapos zeCyber ​​Monday zijongana phila. Kukwanjalo Intengiso yeAmazon Cyber ​​yangoMvulo . Iqela le Eyona nto ithengwayo ngeCyber ​​ngoMvulo zilungele ukubanjwa nazo, njengoko zinjalo Ukujongana neeholide kuThagethi .
Qiniseka ukuba ujonga eyethu Imicimbi yefowuni yeCyber ​​ngoMvulo , Kodwa kweli nqaku elithile thina & apos; sijolise kwezona zibalaseleyo uphando Izivumelwano zePixel ziyafumaneka ngeCyber ​​Monday 2020. Apha siyahamba!
Iintetho zeGoogle Pixel 5 zeCyber ​​ngoMvulo
Ungajonga eyona nto ithengiweyo kuba ibonelela ngePixel 5 ngeIxabiso lama- $ 50 lisikiwexa uyenza isebenze kumphathi omkhulu. Landela ikhonkco elingezantsi ukufumana iPixel 5 yakho ngoku. Owu! Kwaye ukuba ukhetha i-Sprint, edityaniswe ne-T-Mobile ekuqaleni kwalo nyaka, njengomphathi wakho omtsha kwi-Best Buy, ungafumana iPixel 5$ 599-Izo & apos; s$ 100icimile! I-Google Pixel 5 $ 450 yeedola $ 72499 Iphelelwe lixesha $ 599 $ 699 Iphelelwe lixesha $ 69999 Iphelelwe lixesha Iphelelwe lixesha $ 649 Iphelelwe lixesha $ 649 $ 699 Iphelelwe lixesha
Ukongeza koku, unokufumana uGoogle kunye neeapos ezithandwa kakhulu yiPixel 5 kwiVerizon kwaye uthatheukuya kuthi ga kwi-550 yeedolaixabiso layo le- $ 699 ngentengiso efanelekileyo kunye nomgca omtsha. Enye indlela kukukhetha iPixel 5$ 29.16 / ngenyangangesivumelwano seminyaka emibini. Unokufumana enye i-250 yeedola xa uswitsha.
Kukho ukhetho lwe-AT & T ngokunjalo. Kwisiphatho, i-Pixel 5 iyafumaneka ngokubonakalayo$ 15 / mo(kwiinyanga ezingama-30) ngomgca omtsha okanye ngohlaziyo. Oko kuya kukunika amanqaku ngePixel 5$ 450 yeedola, $ 274.99, ezantsi kwixabiso elidwelisiweyo le- $ 724.99.
I-Google Pixel 4a kunye nePixel 4a 5G Cyber ​​ngoMvulo izaphulelo
UmgangathoIPixel 4aImodeli yenye yezona ndawo zibalaseleyo ziphakathi kwinqanaba lokuthengisa. Okwangoku ikwisitokhwe eAmazon, nangona ungayifumana ngexabiso eliphantsi kuyoEyona Ntengiso.Umthengisi unikezela ngesaphulelo sakhe esiqhelekileyo se- $ 50 kwaye kule meko yenye yezona zikhetho zibalaseleyo kwifowuni esele ifikeleleka kakhulu. Ukujonga ixabiso lentengiso eliqhelekileyo le- $ 349,$ 50 isaphuleloiqala ukubonakala njengokonga okukhulu.
Unokukhetha kwakhona i-smartphone, enenye yeekhamera ezintle kwimarike, eInguqulelongesicwangciso esingenamda kumgca omtsha kwaye ufumane i-380 yeedola kwiikhredithi zetyala, oko kuthetha ukuba ngobuchule unokuyithathaIPixel 4a mahala. I-Google Pixel 4a $ 299 $ 34999 Thenga kwiBestBuy Jonga ixabiso Thenga kwiAmazon $ 349 Thenga kwiithagethi $ 349 Thenga kwi-B & H Photo $ 34999 Thenga kwiVerizon
I-AT & T.ayina stock yePixel 4a kodwa inomdla ngakumbiIPixel 4a (5G)Umahluko nje$ 10 / mo(iinyanga ezingama-30) ngomgca omtsha, ke ekugqibeleni uhlawula$ 300(Ixabiso lentengiso yi- $ 524). Kwaye ukuba unefowuni endala yokuthengisa, umntu ophetheyo uya kukunika ifowuni encinci njenge- $ 150 ($ 5 / mo yeenyanga ezingama-30).
Eyona Ntengisoikwabonelela ngomnxeba kwifayile ye-Isaphulelo se- $ 50 ngokuvulakwayeInguquleloizibonelelo a$ 250 isaphulelokukodwaInguqulelo ye-mmWavengorhwebo olufanelekileyo. Ungayifumana isezantsi njenge- $ 120 ($ 5 / moiinyanga ezingama-24) ngesicwangciso esifanelekileyo esingenamkhawulo kunye nomgca omtsha. I-Google Pixel 4a 5G $ 44999 $ 49999 Thenga kwiBestBuy $ 24999 $ 59999 Thenga kwiVerizon Jonga ixabiso Thenga kwiAmazon $ 499 Thenga kwiithagethi $ 499 Thenga kwi-B & H Photo
Ukujongana nePixel 4, iPixel 3, kunye nePixel 3a yeCyber ​​Monday
I-Google Pixel 4 kunye nePixel 4 XL yangaphambili-gen ngokusemthethweni iqala kwi- $ 799 nakwi- $ 899 ngokwahlukeneyo, kodwa ungafumana izivumelwano ezingcono eAmazon. Ukuchaneka ngakumbi, unakogcina isibini samakhulukuzo zombini iiflegi. Ungonga ngakumbi nangakumbi ukuba ukhetha imodeli ehlaziyiweyo. Uninzi lwabathengisi banesitokhwe esilinganiselweyo sePixel 4 kunye nePixel 4 XL, ke musa ukulinda ixesha elide ukuba ufuna ukufumana esinye sezi zixhobo zibalaseleyo.
I-Google Pixel 4
I-Google Pixel 4 XL
I-Google Pixel 3
Ukuba ufuna iPixel kodwa awunakho ukufikelela kwimodeli entsha, mhlawumbi iPixel 3 inokuba ngumdla. Kukho into elungileyo kakhulu kwiAmazon ebona ifowuni ithengiswa ngaphantsi kwe- $ 300.
Unokujonga kwakhona iGoogle Pixel 3a kunye nePixel 3a XL. Ezi smartphones zimbini zezinye zezona zibalaseleyo ngokwee-smartphones eziphakathi, kwaye ziyagqwesa kwisebe lekhamera. I-Google Pixel 3a $ 239 $ 399 Iphelelwe lixesha Iphelelwe lixesha I-Google Pixel 3a XL $ 299 $ 479 Iphelelwe lixesha Iphelelwe lixesha
Kutheni kukho imivalo emnyama xa ndibukele iimovie kwi-iPad? Kucacisiwe
I-AT & T ibongoza abathengi ukuba bathenge iifowuni ezintsha ukuze baqhubeke nokusebenzisa inethiwekhi
Isivumelwano se-AT & T sinciphisa ixabiso le-Samsung kunye neapos zeGalaxy Tab A7 Lite kwisiqingatha; iimeko ziyasebenza
UGoogle akanakukhusela kwi-Joker malware, ke lixesha lokuba ucime eziapps ziyingozi
Uyenza njani isipili isikrini sakho sefowuni ye-Android kwiPC simahla, ngenkxaso yekhibhodi epheleleyo kunye nemouse